Archive du 20190523
Fifidianana depiote Tena mbola mahatoky ny TIM i Mahajanga
Fitsenana makotrokotroka no nandraisan’ny vahoakan’i Mahajanga an’i Marc Ravalomanana omaly takariva.
« Collectif des candidats » Boriborintany faha-2 Namoaka fanambarana iombonana teny Tsiadana
Noho ny fisian’ny fikononkononana hitaterana olona avy amin’ny faritra ivelan’ny boriborintany faha-2 misy azy ireo ka kasaina hampifidianana ao amin’ity fari-pifidianana ity amin’ny andron’ny 27
“Eid al-fitr” an’ny mpino Silamo Andro tsy hiasana fa handraisan-karama ny 4 jona izao
Araka ny tapaka tamin'ny filankevitry ny governemanta tamin'ny fiandohan'ny taona, dia andro tsy fiasana nefa andraisan-karama ny 4 jona 2019.
Fahatelo sady farany
Fihodinana fahatelo, hono ity, ho an’ilay kandida filoham-pirenena tsy nolaniana tamin’ny fihodinana faharoan’ny fifidianana natao teto amintsika farany teo sy ny ekipany.
MPANGALATRA TRATRAN’NY GPS
Noraisim-potsiny ireo mpangalatra moto teny Soavimasoandro fa nisy famantarana itarafana lavitra na GPS ilay fiara kodiaran-droa.
Hetsika Le zoma de Tana Tsy nahaloa hofan-toerana efa herintaona mahery
Nitondra fanazavana mikasika ny fampiatoan’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra na CUA ny fampiasan’ny Le Zoma de Tana ny Parvis Analakely, ny talen’ny seraseran’ny kaominina Antananarivo Renivohitra, Tiana Harilaza Raharivelo.
Fiompiana kisoa sy omby Olona 300 nahazo fiofanana teny Alasora
Nitady vahaolana hahafahan’ny isan-tokantrano manatsara ny fidiram-bolany ny kaominina Alasora, izay ahitana fokontany 20 isa.
Politika eto Madagasikara Mandrava, mamotika firenena
Nokendrena natao tamin’ny fifidianana filoha farany teo ny fibodoana fahefana tamin’ny fomba an-kolaka nataon’ny HVM